Polygrams - Tangram & Block ကိုပဟေဠိ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Polygrams - Tangram & Block ကိုပဟေဠိ
Polygrams - Tangram & Block ကိုပဟေဠိ APK ကို
Polygrams မျဉ်းပဟေဠိစုဆောင်းခြင်း Linedoku ၏ဖန်တီးသူဖွငျ့အခြားရိုးရှင်းတဲ့, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာယုတ္တိဗေဒပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခေတ်သစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိဒြပ်စင်နှင့်အတူဂန္တရုတ် tangram ဂိမ်းများကိုပေါင်းစပ်။
ဆလိုက်များနှင့်သူတို့ကိုထပ်မပါဘဲဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်သို့အနား shards ချိတ်ဆက်ရောင်စုံပုံစံမျိုးစုံဖန်တီးပါ။
တစ်ပဟေဠိ Completing အားမစိုက်ရဖြစ်ပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်းကဂီယာကလေးတွေနှင့်လူကြီးများအနေနဲ့စွဲလမ်းအချိန်ပြုန်းတီးစေသည်သောလှည့်စေနိုငျပါသညျ! Polygrams စတိုင်နဲ့အရောင် variating ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုအထုပ်များ၏တန်ချိန်ပါရှိပါတယ်။ နှစ်ထပ်ပျဉ်ပြား, မြို့ရိုး, လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတြိဂံ, ဆဋ္ဌဂံနှင့်ပိုပြီးကဲ့သို့သောအခြားအထူးပုံစံမျိုးစုံအကြားကိုရွေးချယ်ပါ။
တဦးတည်းသာချစ်နိုင်မည်တစ်ဦးကဦးနှောက်ကိုလှောပဟေဠိဂိမ်း - ကဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်သို့အပိုင်းပိုင်းသငျ့ရိုးရှင်းစွာကျေနပ်စရာခံစားရ, သင့်စိတ်ထဲ unwind ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မယ့်ရှည်လျားတစ်နေ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်!
☆ One Touch ဂိမ်း - တဦးတည်းလက်၌ဖွင့ ်. ဖြစ်ဒီဇိုင်း
☆ Beginner များနှင့်မာစတာအဆင့်ဆင့်
☆အဘယ်သူမျှမဝိုင်ဖိုင်လိုအပ် - တွေအတွက် Playable အော့ဖ်လိုင်း
☆အခမဲ့အကြောင်းအရာ updates များကို
Polygrams - Tangram & Block ကိုပဟေဠိ
14.81 ကို MB
အရောင်2ဖြည့်ပါ - ...